May 14, 2021 222
नारायणहिटी दरबारमा भएको काण्ड (२०५८ जेठ १९) अत्यन्त पीडादायक घटना थियो । सो घटनामा मारिएका राजा वीरेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहका वंशज, राजा त्रिभुवनका नाति र राजा महेन्द्रका सुपुत्र मात्र थिएनन्, आफ्नो कालखण्डमा संसारमै अत्यन्त सम्मानित, विशिष्ट राजनेता (स्टेट्सम्यान) मध्ये एक थिए । अमेरिका, चीन, सोभियत संघ, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन, भारतलगायतका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गर्दा उनले पाएको ठूलो सम्मानले नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो हुन्थ्यो ।
एउटा अल्पविकसित राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षले सुसम्पन्न र अति विकसित राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरूसँग संवाद गर्दा समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिन सक्छन् र त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं महाशक्तिहरूलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ भन्ने कुरा राजा वीरेन्द्रले राम्रोसँग प्रमाणित गरेर देखाइदिए ।ब्रिटेनको इटन कलेज र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा टोकियो विश्वविद्यालयको अब्बल शिक्षाले मात्र राजा वीरेन्द्रको व्यक्तित्वलाई विराट् र उच्च बनाएको होइन ।
राजदरबारमा परिवारबाट पाएको संस्कार, तालिम, राष्ट्र र जनताप्रति पिताको समर्पण, अदम्य एवं अतुल्य प्रेम एवं राष्ट्रलाई सुदृढ, समृद्ध र युगानुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने संचेतनाले राजा वीरेन्द्रलाई सदैव उत्प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । उनको जीवनकाल (२००२ पुस १४ गतेदेखि २०५८ जेठ १९ सम्म) अध्ययन गर्दा व्यक्तिगत सुखसयल, भोगविलास, मोजमज्जा र अर्थहीन कुरामा उनले समय बर्बाद गरेको पाइँदैन । पलपलको सदुपयोग गरे राजा वीरेन्द्रले ।
२०३८ साल भदौ १६ गते पेरिसमा आयोजित अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले गरेको सम्बोधन संसारमै चर्चित र प्रशंसित बन्न पुग्यो । धनी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित राष्ट्रका पीडा, व्यथा, अभाव, बेरोजगारलगायतका गम्भीर समस्याबारेमा स्पष्ट नीति बनाएर सकारात्मक काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव र आग्रह थियो । उनले भाषणमा अभिव्यक्त गरेका हृदयस्पर्शी शब्दहरूले त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी द्रवित र भावविभोर बन्न पुगे ।
अल्पविकसित राष्ट्रहरू (अफगानिस्तान, नेपाल, लाओस, भुटान, मालदिभ्स र समोआ) सहभागी भएको सो राष्ट्रसंघीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले दरिद्रताको चित्रण गरे ।आज विस्तारै हराउँदै छ राष्ट्रको गरिमा र इज्जत । राष्ट्रमा अहंकार, विखण्डन र विभाजनको कर्कस आवाज सुनिन्छ । यस्तै अन्योलमा राजा वीरेन्द्रले सोधिरहे झैं लाग्छ, ‘कसरी बचाउँछौ यो देश ? कसरी बचाउँछौ राष्ट्रिय एकता र कसरी जोगाउँछौ स्वाभिमान र इतिहास ?
‘अल्पविकसित देशको एक गरिब व्यक्तिले पौष्टिक आहारा खानै पाउँदैन । संसारमा यस्ता गरिबको संख्या पनि करोडौं छ । उसलाई कुनै पनि रोग लाग्न सक्छ । उसको आयु छोटो छ, ऊ छाप्रोमा बस्छ, जहाँ गरिबी एवं दरिद्रताले उसलाई सधैं घेरिराखेको हुन्छ । न उसले पढेको छ, न त उसमा कुनै सीप नै छ । नियमित रूपमा ऊ खान पाउँदैन र यदि संयोगले एक छाक पाइहाल्यो भने अर्को छाक कताबाट जुटाउने भन्ने डरले उसलाई भयभीत गराउँछ ।
लुगा लगाएको भए पनि उसको त्यो लुगा झुत्रो मात्र हुन्छ । ऊ नांगै खुट्टाले हिँड्छ । फोहोर, अल्पआहार र सरुवा रोगले उसको शरीरमा आफ्ना चिन्हहरू छोडेका हुन्छन् । धेरैजसो ऊ गाउँहरूमा नै बस्छ । ती गाउँ विश्वको शेष भागबाट अलग्ग मात्र होइन, पुग्नै नसकिने हुन्छन् । सहरका फोहर बस्ती अथवा छाप्राहरूमा पनि ऊ भेटिन्छ । उसले पिउने पानी न सुरक्षित हुन्छ न त सफा नै । ऊ कि बेरोजगार हुन्छ कि त अर्धरोजगार ।
उसले काम पायो भने पनि उसलाई कि बढी काम लगाइन्छ कि त मेहनत हेरी कम पारि श्रमिक दिइन्छ । उसले तिरस्कार र बद्नामी सहनुपर्छ । जन्मदेखि मृ’ त्युपर्यन्त ऊ दरिद्र रहन्छ । धेरैजसो ऊ बाल्यावस्थामै मर्छ । बाँच्यो भने पनि अभाव र विपन्नताले उसलाई मृ त्युसम्म छोड्दैन । अन्त्यमा जब उसले संसार छोड्छ, यता बाँच्नेहरूभन्दा म’रेर जाने ऊ नै बढी सुखी देखिन्छ ।’
राजा वीरेन्द्रले भनेका छन्, ‘संकटको बेला मानिसको पहिचान हुन्छ ।’ बीपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइरालालगायतका केही राजनीतिज्ञले राजालाई त्यसबेला हौसला दिएका थिए । राजासँग राजनीतिक मतभिन्नता भए पनि राष्ट्रलाई संकट पर्दा राजतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादी एकै ठाउँमा बलियोसँग उभिनुपर्छ भन्ने बीपी कोइरालाको अटुट विश्वास थियो । नेपाली कांग्रेसको मेरुदण्ड र धरातल नै त्यही विश्वास थियो । २०४७ सालको संविधान बनाउने काममा अग्रणी भूमिका खेल्ने कांग्रेस पार्टी आज नीतिविहीन र नेताविहीन बनेको छ ।
त्यो पार्टी ‘भत्क्या पार्टी’ जस्तो छ र गुटहरू प्रबल र निर्णायक बनेका छन् । जोसँग मिल्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ, त्यहीसँग टाँसिने नीतिले कांग्रेस मात्र होइन, अरू कैयन् दल पतीत बन्दै गएका छन् । राजा वीरेन्द्र र बीपीले परिकल्पना गरेको प्रजातन्त्रको स्वरूप आज कुरूप देखिएको छ ।
जसरी जनताको दुःखमा राजा वीरेन्द्र भावविभोर हुन्थे, त्यसैगरी शान्ति र विकासका योजनाहरू देख्दा उनी खुसी हुन्थे । हिमाली जिल्ला मुस्ताङका पूर्वमन्त्री तथा संस्कृतिविद् कृष्णलाल थकाली भन्छन्, ‘दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र गुम्बा विकास समितिमा मात्र होइन, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सदस्य, राष्ट्रिय सभाको सदस्य र मन्त्री भएर मैले काम गर्दा राम्रोसँग दरबार बुझ्ने मौका पाएँ । राजा वीरेन्द्रको प्राथमिकता भनेकै शान्ति र विकास थियो ।
छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । हिमाल, पहाड र तराई कतै पनि जनतामाथि भेदभाव नहोस् भनेर उहाँ सधैं सतर्क रहेको मैले पाएँ । प्राचीन धर्म-संस्कृतिप्रति उहाँको गहिरो श्रद्धा र अनुराग थियो ।’राजा वीरेन्द्र सबैका पिता र अभिभावक जस्ता थिए । आफूलाई थाहा नभएका कुरा जोसँग पनि सिक्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । २०२२ सालमा भारतको मसुरी घुम्न जाँदा उनले भारतीय चलचित्रका हास्य कलाकार जोनी वाकरसँग हास्यव्यंग्यबारे छलफल गरेको प्रा. यदुनाथ खनालले लेखेका छन् । चित्रकला (पेन्टिङ) राजा वीरेन्द्रको सौख (हवी) थियो ।
Prevकोरोना जितेर पूर्वरानी कोमल शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज
Nextप्रहरी आएर कपडा खोलि श्रीमती माथि चड्दै गरेको श्रीमानले देखेपछि (भिडियो सहित)
३ वर्ष पहिले बुवाको मृत्यु, अहिले आमा ले पनि संसार छोडिन् : बिचरा यी नाबालक हरुको बिचल्ली (388)